Ma Danbaa Ma dawbaa WQ-Hiba Essa Mohamed | Haqabtire News
Ma Danbaa Ma dawbaa WQ-Hiba Essa Mohamed
Shaashadaha tiifiyada dalka hadaad dhugatid ayaamkan waxa aad ugu badnaa haweenka oo ka hadlaya arimo siyaasadeed,ololaha musharixiinta doorashooyinka
baarlamaanka iyo madax tinimadaba. Indhahaaguna waxey qabanayeen iyagoo in baden u dano seegay soo dhaweynta musharaxiinta ku loolamaya jagada madax weyne, ee dadka abaaruhu taabaaleeyeen, iyana naf kasii dayaya, masiibooyinka jirana u badelaya Fursado ay ku kasbadaan taageerayaal ee I arkaay I maqlaayda ku wareeriyey dadkii.
Amaba iyagoo shir jaraa,id qabanaya oo leh “xisbi hebel baanu taageero u nahey haddaanu nahey ururka Ganbooleyda ee Car-dhawaaq” amaba ka hadlaya arimaha is diiwaan galinta iyo muhimada ay hadhaw leedahay, oo waliba dadka soo ururinaya oo kala maamulaya.
Haddaba waxa cad oo aan caad saarneyn in haweenku sidoodaba yihiin cida u badan ee codadka bixisa, ololayaashana si mug leh uga qeyb qaata, mararka qaar marka laga fursan waayana shandadahooda ayaa loo dhacaa si looga helo xoolo lagu burburiyo ololayaasha dadka lagu kala jiidanayo.
Taasoo jirta haddana miyaaney tu acuudu bile ahayn in aanwaxba loo quudhin iyana aaney waxba raadsan!, kaba soo qaad gabadhbaa u damqatay dalkeeda oo is tiri bal meel kale wax uga soo goyn mayside siyaasadan iyo dawladan dhinac ka raac, amaba han siyaasadeed oo iyada u gaara yeelatey, deedna Raggii iyaga ba in baden loo carareyay ee abaalka looga fadhiyey ayuunbaaaf buuxa ku odhanaya “Nimankiibaaba loo taag la,aabee adiga xageenu ku geynaynaa”. Miyaaney aheyn tii shaley iyo doraad u ordeysay hadba hawshay u dirtaan, ee boqol nin ka hawl iyo karti badneynd, wegar! oo shacabka uu dastuurku ku sheegay iney yihiin muwaadiniin xaq iyo xuquuq isku mida miyaaney iyagu ka mid aheyn, marka laga yimaado wixii shareecadu ku kala kaxeysay, cajaba laka!
Bal hadaba dumaroow ama codkiina, taageeradiina, qalalamlayntiina, soo dhaweyntiina, Mudaharaadkiina iyo buraanburkiina madhxista oo meel dhigta intey xaaladu sidan dhaameyso, haddii kalena dee dadaalkiina midhihiisa gurta! Ma labadaa wax ka dhexeyaa jira?. Waa la arkaa oo dumarka xilalka muhiimka ah ka haya xukuumada waa kuwa ugu wax tarka badan, dad badana gacan siiya meesha ay joogaana ay kor u soo kacdo oo horumar la taaban karo gaadho waxa jira mansabyo baden oo haddii haweenka gacanta loo galiyo wadanka is bedal weyn laga dareemi lahaa.
Yeelkeedee hadana waatii la yidhi “Biyo sacabadaada lagaga dhargaa,e” odey ,Suldaan iyo caaqil toona meel ku gaadhsiin maayo dadaala xaaji cabaas waa gaadhaa oo waaba dhaafaaye, koley dumaroow hawli inaguma yaree waxa la jooga haatan xiligii majaraha geedi socodkeena aynu gaddiyi laheyn.
Akhristaha sharafta mudanow markaan sidan leeyahay anigu dumarka uguma yeedhayo iney madax-weyne noqdaan amaba siyaasada faraha lasoo galaan, balse marba inta shir jaraa,id iyo kulamo hebel lagu taageerayo lagu jiro, waa siyaasad xumo, ee golaha oo laga maqnaado ama laga muuqdo waa midh lagama maarmaan ah, markaanu cod rabno noo yaaca, markaad idinku cod raadisaana waa danbi ee guryihiina fadhiya xal maaha raggoow.
Qalinkii Hibo Ciise Maxamed
Hiba Essa Mohamed
Pepsi, Hargeisa Office
Skype: Hiba Essa
Mobile:+252-634024925 or +252-634137364